Ogaden News Agency (ONA) – Boob Loo Gaystay Dukaamada Ajnabiga ee Soweto Koonfur Afrika iyo Booliska oo Baadhaya Sababta Ka Dambaysa
Boob Loo Gaystay Dukaamada Ajnabiga ee Soweto Koonfur Afrika iyo Booliska oo Baadhaya Sababta Ka Dambaysa
Posted by ONA Admin	/ January 23, 2015
Maalintii isniinta ahayd ee ay taariikhdu ahayd 19/01/2015 waxaa magaalada Johannesburg meel aan ka dherayn lagu dilay wiil yar oo da’diisa lagu sheegay 14 jir wiilkaas ayaa u dhashay wadanka Koonfur Afrika sida ay sheegeen ciidamada amaanka ee wadanka Koonfur Afrika. Wiilkaas waxaa dilay dhalinyaro Soomaaliyeed dhanka kale Soomaalida ayaa sheegtay in uu ahaa nin budhcad ah oo kamid ahaa koox dablay ah oo weerar la beegsatay dukaan ay lahaayeen isla markaana ay kusugnaayeen dhalinyaro soomaaliyeed. Dhacdaas kadib waxaa bilawday in laboobo dhamaan dukaamadii dadka qaxootiga ah ay lahayeen ee kuyaalay deegaanka wayn ee loo yaqaano Soweto dadka boobkaas kubara kacay waxaa kamid ah Soomaali, Pakistan, Ethiopian, Bangaladesh, Zimbawian, Malawian iyo Ghanese, inta la ogyahay waxaana lagu dilay dad u dhashay Zimbabwe iyo Malawi.
Inta ay dhibaatadu socotay waxaa la xaqiijinayaa in laba wiil oo Soomaali ah dhaawac soo gaadhay jidh dil ah. Ciidamada amaanka ee booliska ee wadanka Koonfur Afrika ee ka hawlgala deegaanka Soweto iyo magaalada Johannesburg oo is kaashanaya kuna hawl gala baabuurta gaashaaman iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa buux dhaafiyay deegaanka u udhibku kasocdo. Sida ay xaqiijisay saxaafada wadankan Koonfur Afrika waxay boolisku gacanta kudhigeen ugu yaraan dad gaadhaya 70 ruux oo loo qabtay boobka. Afhayeen u hadlay booliska ayaa sheegay in dadkaas la hor keeni doono maxkamad laguna qaadi doono danbiyada kala ah budhcadnimo iyo kicin fidno.
Dhanka kale waxay ciidamada boolisku gacanta ku hayaan wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah kaas oo lagu eedeeyay in uu gaystay dilka wiilka yar oo dhalinyaro ah oo da’diisa lagu sheegay 14 jir. Maanta oo ay taariikhdu tahay 22/01/2015 ayaa wiilkaas lakeenay maxkamad wuxuuna qariinkiisu codsaday in todobaadka danbe looga dhigo isagoo cuskaday in uu ubaahan yahay ruux yaqaana luuqada Afka Somaaliga ah iyo Luuqada Englishka.
Isku soo duuduub oo axsaabta siyaasadeed ee dalka Koonfur Afrika qaar kamid ah ayaa ku macneeyay in ay tahay sinji nacayb (Xenophobia) kaas oo dadka reer Koonfur Afrika ay u muuqdaan dad aan garanaynin xuquuqunsaanka. Ururka shaqaalaha ayaa isagu sheegay boobka raashinka oo uu sabab uga dhigay gaajada iyo baahida dadka reer Koonfur Afrika ay qabaan .
Masuuliyiin saxaafada la hadlay ayaa walaac ka muujiyay mar ay tageen gooobta boobku ka socdo kadib markii ay arkeen ardo dhigata iskuulka oo ku labisan yuuni foon kuwaas oo boobaya raashinkii yaalay dukaamada. Warku wuxu intaas kudarayaa dadka laqabta waxaa kamid ah ee baadhitaanka lagu wado xunbo katirsan booliska kuwaas oo lagu eedeeyay in aysan gudanin waajibaadkoodii, Soomaalid ayaa dusha ka saartay masuuliyad adhibaatadan balaadhan ciidamada booliska.